Dowlada Soomaaliya oo codsi u dirtay Koofurta Suudan - Awdinle Online
Dowlada Soomaaliya oo codsi u dirtay Koofurta Suudan
December 4, 2019 (Awdinle Online) –Dowladaha Soomaaliya iyo Koofurta Suudaan ayaa ka wada hadlay sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ay u helahaayeen goobo ay ku ganacsadaan.
Safiirka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee dalka Koofurta Sudan danjire Xuseen Xaaji Axmed ayaa xarunta safaaradda ee magaalada Jubba kulan kula qaatay wasiirka arrimaha gudaha dalka Koonfurta Sudaan michael chiangjiek iyadoo kulankaas ay labada masuul uga hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin sidii Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi u helahaayeen dhul ay ku ganacsdaan.
Safiirka ayaa sheegay in uu wasiirka kala hadlay habka ugu hoboon ee Ganacsatada Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen dhul ku haboon ganacsiga.
Ganasatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koofur Afrika ayaa ka cabanayay mudooyinkaan dambe in Dowlada Wadankaasi doonayso in ay goobe kale u wareejiso ganacsataan,oo Magaaladda Jubba ee Caasimada Koofurta Suudaan ku leh Goobo ganacsi isla markaana aysan haysan dhul ku filan.
Dalka Koonfurta Sudaan waxaa ku nool ganacsta badan oo halkaas ku ganacsada kuwaas oo xiliyadda qaarna lakulma dhibaatooyin kala duwan oo dhinacyo badan kaga yimaada, balse madaxda Safaaradda Soomaaliya ee dalkaas .
Previous articleAlshabab Oo La Wareegtay Gacan Ku Heynta Deegaanka Dhicise Ee Dalka Kenya
Next articleC/raxmaan C/Shakuur Oo Kafalcelyey Eedihii Loo Soo Jeediyay